Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Oleksandr Zinchenko Tantaran'ny Ankizy Miampy Filazana Untold Biography Facts
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny sariitatry ny baolina kitra mitondra ny anarana hoe "Oleksy". Ny fitantaranay Oleksandr Zinchenko momba ny fahazazana plus Untold Biography Facts dia mitondra anao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Oleksandr Zinchenko Tantaran'ny fahazazana ho an'ny fahazazana - Ny fandalinana hatramin'ny daty. Credit any DonetskWay ary hamindra ny Mkt
Ny famakafakana dia misy ny fiainam-pianarany, ny fiainany, ny fanabeazana / fananganana asa, ny fiainam-piandohana, ny lalana mankany amin'ny tantaran'ny laza, mitombo ny laza laza, ny fifandraisana, ny fiainam-piainana ary ny fomba fiainany sns.
Eny, fantatry ny rehetra azy fa mpilalao mahay sy miankina amin'ny safona ankavanan'ny Pep Guardiola izy. Na dia izany aza, vitsy monja no mihevitra ny biolojia Oleksandr Zinchenko izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Oleksandr Zinchenko Tantaran'ny fahazazana sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Oleksandr Zinchenko dia teraka tamin'ny andro faha-15 tamin'ny Desambra 1996 tamin'ny rainy Volodymyr Zinchenko sy ny reniny (izay tsy fantatra ny anarany) ao amin'ny tanànan'i Radomyshl Okrainiana.
Oleksandr Zinchenko Ray sy Neny
Nihalehibe i Zinchenko ho zanaka tokana ho an'ny ray aman-dreniny ao Radomyshl, tanàna manan-tantara any amin'ny faritra avaratr'i Ukraine izay mitazona ny fiaviany sy ny fiaviany. Ity tanàna manirery ity izay be mpahalala ankehitriny noho ny tranombakoka sy ny zavakanto no foibem-pitantanana Ny Holocaust, teny iray ampiasaina hamaritana ny fandripahana an'ady eran'izao tontolo izao ny Ady Lehibe Faharoa.
Mitombo ho an'i Oleksandr Zinchenko ny zavatra mihalehibe ao Radomyshl
Zinchenko dia tsy nitaiza avy amin'ny fiaviana fianakaviana manan-karena. Ny ray aman-dreniny dia tahaka ny ankamaroan'ny olona izay manao asa ara-dalàna, tsy nanana fanabeazana ara-bola tsara indrindra ary matetika no sahirana amin'ny vola.
Oleksandr Zinchenko Famintinana ny tantaram-pitiavam-bahaon'ny ankizy momba ny tantaram-pianakaviana - Fanabeazana sy fanabeazana
Ho an'i Oleksandr, ny fahafenoan'ny tanànany dia nifarana isaky ny misy baolina kitra an-tongotra. Tsy ilay zaza izy Nahaliana ny lalao kilalao vaovao indrindra, NEFA baolina kitra ihany ary manana namana akaiky ny fahazazany.
Oleksandr Zinchenko Fianarana sy fananganana karama
Nomena fanomezana amin'ny fanaovana kicking sy hanao zavatra lehibe amin'ny baolina soccer. Zinchenko dia nanomboka nandositra ny baolina kitra tao amin'ny efitranon'ny fianakaviany, hira iray izay nandeha tamin'ny sahan'i Radomyshl. Ny fanomezana fampianarana ny tenany amin'ny baolina kitra dia nandoa ny vola azony satria Zinchenko tsara vintana no niantso fitsarana tao amin'ny klioban'ny tanànany, Karpatiya Radomyshl.
Oleksandr Zinchenko Famintinana ny tantaram-pitiavam-bahaon'ny ankizy momba ny tantaram-pianakaviana - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Ny fitiavan'i Oleksandr Zinchenko tamin'ny lalao dia nahita azy tamin'ny taona 8 niaraka tamin'i Karpatiya Radomyshl, klioba tanora izay nanome azy ny sehatra hametrahana ny fototry ny asany.
Nandritra ny Akademia dia hitan'i Zinchenko avokoa ny mpitsikilo baolina kitra isan'ireny anisan'izany ireo mpiara-miasa ao aminy izay mivavaka amin'i Andrei Shevchenko, mpilalao baolina kitra lehibe sy sampy lehibe indrindra any Ukraine ho an'ny rehetra. I Olek manokana dia momba ny talenta tsy nitady azy any Ukraine. Ny hany niriny dia ny Sheva manaraka.
Nijanona niaraka tamin'i Karpatiya Radomyshl i Zinchenko nandritra ny taona 4 talohan'ny nierenany sy nahazoany an'i Monolit Illichivsk izay klioba tanora Okrainiana iray fantatra amin'ny famolavolana talenta tanora ho ao amin'ny oniversite lehibe kokoa. Vetivety dia nanao fahatsapana niaraka tamin'ny klioba izy noho ny fahatapahan-kevitr'izy ireo hijanona teo amin'ireo mitovy aminy. Zinchenko nanao fandrosoana henjana tamin'ny alàlan'ireo vondrona sokajin-taona, hira iray izay nanendry azy ho mpilatsaka ho fidiana ambony amin'ny safidy baolina kitra zokiolona.
Oleksandr Zinchenko Famintinana ny tantaram-pitiavam-bahaon'ny ankizy momba ny tantaram-pianakaviana - Road to Fame Story
Ny fiara sy ny finiavan'i Oleksandr no fananany sarobidy indrindra. Ny taona 2010 nahita azy notsidihin'ny akademia lehibe indrindra any Ukraine, Shakhtar Donetsk izay naka fanahy azy amin'ny fanekena ny tolotra nomeny. Tsy nahalala firy akory izy fa hiditra amin'ny sehatry ny asa. Ankehitriny dia hambarany aminao ny tena zava-nitranga !!
Naniry fatratra i Olek hiditra ao amin'ny ekipa zokiolona izay nanana kintana ambony, toa an'i Fernandinho, Douglas Costa, ary Henrikh Mkhitaryan. Tany Shakhtar, tsy toy ny klioba tanora hafa izay nataon'i Olek, no lasa ny toe-javatra tena sarotra. Amin'ny teniny:
Nanana roa taona sisa teo amin'ny fifanekena aho ary nilaza tamiko izy ireo fa tsy maintsy hanohy azy ireo TSIKA tsy hilalao amin'ny ekipa voalohany. Ny nofinofiko dia ny hilalao amin'ny ekipa voalohany.
Tsotra, ny club BLOKED dia ny fahombiazany amin'ny baolina kitra tranainy ary tsy misy fomba ahafahan'ny lehilahy Okrainiana hafa voadona. Ity hadisoana ity dia nitranga na dia fony izy kapitenin'ny ekipa tanora aza.
Lalan'i Oleksandr Zinchenko ho Fame Tantara. Ny trosa any Donetsk-Way
Ny klioba aza nandeha hatramin'ny nanaporofo fifandraisana hafa ho azy hanasonia ary tsy misy antoka amin'ny fampidirana ekipa voalohany. Fanolorana fifanarahana mahery vaika izay tonga toy ny fandrahonana. Ao amin'ny tenin'i Olek;
Nilaza izy ireo fa raha tsy hanao sonia aho dia tsy hilalao ho azy ireo na ho an'ny ekipan'ny tanora izay nataoko. Kivy aho nandritra ny efatra volana eo ho eo. Vao nihaona isaky ny fivoriana fiofanana aho fa tsy milalao. Teo amin'ny sesitany manokana aho.
Ho ratsy kokoa ny zava-misy dia nipoaka ny ady Okrainiana ary niditra tao anatin'ny làlan'ny krizy ny fikambanana. Tamin'izany, Oleksandr dia mbola nifikitra tamin'ny fifanarahana. Ny ady dia nahatonga ny ray aman-dreniny nifindra monina tany amin'ny tanànan'i Ufa, Ufa, fanapahan-kevitry ny fianakaviana izay nahatonga an'i Oleksandr nandao ny asany tanora niaraka tamin'i Shakhtar Donetsk.
Oleksandr Zinchenko Famintinana ny tantaram-pitiavam-bahaon'ny ankizy momba ny tantaram-pianakaviana - Mitsangàna amin'ny tantara
Niverina indray ny lasa mba hampahasosotra azy amin'ny fikatsahany hifindra amin'ny klioba lehibe kokoa hanombohana karama zokiolona.
Fantatrao ve?… Tamin'ny taona 16, ny olan'ny fifanarahan'i Oleksandr tamin'i Shakhtar dia nanakana azy tsy hanao sonia amin'i Rubin Kazan. Olana iray hafa io nanakana azy tsy hilalao nandritra ny volana 18 izay nihena. Nila izany fotoana izany handaminana ny zava-drehetra. Tamin'ity farany dia nanatevin-daharana an'i Ufa, fikambanana baolina kitra Rosiana monina any Ufa, i Oleksandr dia avy amin'ny tanànan'ny ray aman-dreniny. Nanome an'i Oleksandr ny hilalao amin'ny Lalao Premier Rosiana ny klioba.
Ny faniriana fotsiny dia famporisihana natokana ho an'ny tanora Ukranian izay nahatsapa ny tokony hananana kolontsaina vaovao, fomba fiofanana ary fahazarana. I Oleksandr Zinchenko dia niaritra ny sehatry ny asa zokiolona meteoric dia nalaza tao Ufa satria lasa iray amin'ny talenta mafana indrindra ao amin'ny klioba izy.
Ny fiakaran'ny Oleksandr Zinchenko any Rosia. Ny trosa amin'ny 90Min
Nahasarika ireo klioba ambony eropeana izay niarahany tamin'i Man City ny fampisehoany. Tamin'ny 4 Jolay 2016, Zinchenko dia nanao sonia ho an'ny klioba Premier League Manchester City tamin'ny vidiny tsy voamarina izay voalaza fa manodidina ny £ 1.7 tapitrisa.
Tonga tany amin'ny klioba feno talenta iray i Zinchenko, nanaiky ny handefa ny tenany tany amin'ny PSV Eindhoven, fikambanana izay nanampy azy hifanaraka amin'ny fiainana any andrefan'i Eoropa. Ny fiverenany tany an-tanànan'i Man tamin'ny voalohany dia nahatsapa ho tsy misy dikany, saingy taty aoriana dia nisy vongan-java-manjo rehefa nandratra ny Benjamin Mendy nanome azy fahafahana hanangona fitakiana amin'ny ankavia havia. Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, Zinchenko tamin'ny vanim-potoana 2018 / 2019 dia nanampy ny ekipany tamin'ny fandresena azy ireo.
Oleksandr Zinchenko Mitsangana Mitantara Tantara
Na dia mety tsy ho Andriy Shevchenko izy taloha na dia izany aza, fa Oleksandr Zinchenko has voaporofo amin'izao tontolo izao fa izy no fampanantenana mahafinaritra fatratra an'ny taranja baolina kitra Okrainiana. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Oleksandr Zinchenko Famintinana ny tantaram-pitiavam-bahaon'ny ankizy momba ny tantaram-pianakaviana - Relationship Life
Noho ny fiakaran'ny lazany sy ny nandresahany ny treble ho an'ny Man City, dia azo antoka fa mpankafy maro no nanontany ny fandoroana; Iza no sakaiza na vadin'i Oleksandr Zinchenko?. Tsy misy ny mandà fa ny endrika tsara tarehy tsy hanao azy ho ankafizin'ny mpankafy vehivavy azy. Saingy, ao ambadiky ny mpilalao baolina mahomby, misy ny sipa manintona, ao amin'i Vlada Sedan izay mpanao gazety Okrainiana.
Fantatrao ve? ... Ny kintan'ny MAN CITY dia nandry tamim-pitiavana tamin'ny sakaizany fony izy niasa tamin'ny asany ho mpanjifany. Noho izy niseho tampoka tsara tarehy, i Oleksandr Zinchenko dia tsy naka fanahy fotsiny, fa nianjera tamim-pitiavana naniry hanoroka azy nandritra ny tafatafa mivantana tamin'ny fahitalavitra.
Oleksandr Zinchenko Fifanarahana Fiainana-Credit to Ny masoandro
Ity tafatafa ity dia nitranga rehefa vao avy nidina an-tsaha ny sehatra iraisam-pirenena Okrainiana taorian'ny fandresena lehibe an'i Serbia tamin'ny fifaninanana Euro 2020.
Taorian'ny oroka nambolena, ny mpankafy dia nanamafy tsaho fa nanomboka nifankatia ireo olon-tiany roa ireo. Nanomboka tamin'io fotoana mahafinaritra io, samy nifankatia tamim-pitiavana ireo olon-tiany ireto, araka ny tsikaritra tamin'ny tifitra marobe nalaina tamina kaonty media.
Oleksandr Zinchenko sy Vlada Sedan
Tsy isalasalana fa i Oleksandr sy Vlada dia nijanona ho iray amin'ireo mpifankatia efa natsangana indrindra teo amin'ny tontolon'ny baolina Okrainiana. Iray amin'ireo fialantsasatra tian'ireo mpivady ho an'ny fahavaratra ny Simpsons Ride izay hita any Orlando, FL 32819, Etazonia.
Oleksandr Zinchenko Fitiavana fitiavana miaraka amin'i Vlada Sedan
Ny tsy itiavan'ny olon-tiany ny fifankatiavany dia tsy isalasalana fa ny mariazy na ny fanambadiana dia mety ho dingana manaraka.
Oleksandr Zinchenko Famintinana ny tantaram-pitiavam-bahaon'ny ankizy momba ny tantaram-pianakaviana - Fiainana manokana
Inona no mahatonga an'i Oleksandr Zinchenko manamarika ?. Ny fahalalana ny fiainany manokana tsy lavitra ny sehatry ny baolina kitra dia hanampy anao hahita sary feno momba azy.
Manomboka, mpilalao baolina kitra izy ary manana toetra mavesatra izay manana ny «Talenta iray isan-jato, miasa mafy 99 isan-jato". Oleksandr dia teraka tao Sagittarius ary tiany hihomehezana ary mankafy ny fahasamihafana eo amin'ny fiainana arakaraka ny sary eto ambany.
Oleksandr Zinchenko Personal Life Facts
Io toetra tsy mitanila io dia hafa tanteraka amin'ny olona iainany raha manao ny asany eny an-toerana.
Oleksandr Zinchenko Famintinana ny tantaram-pitiavam-bahaon'ny ankizy momba ny tantaram-pianakaviana - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Rehefa mitsara ny sary eto ambany dia azonao atao ny manatsoaka hevitra fa ny ray aman-drenin'i Oleksandr Zichenko, Irina sy Victor dia manangona ireo tombontsoa sy fitahiana avy amin'ny zanak'izy ireo malala.
Oleksandr Zinchenko Ray aman-dreny
Raha ny fahitana azy dia tian'i Oleksandr ny haka ny ray aman-dreny hisakafo. ny fandavan-tena mba hahazoana antoka ny dadany sy ny reniny dia mitovy amin'ny fanolorantena napetrany tao anaty kianja.
Oleksandr Zinchenko no mivoaka ny ray aman-dreniny
Oleksandr dia toa manakaiky kokoa ny reniny, tsy mitovy amin'ny dadany. Manana fitoviana akaiky amin'ny reniny izy, tsy toy ny dadany izay mora lazainao amin'ny sary.
Oleksandr Zinchenko sy ny reniny - Irina
Na dia kely aza ny fantatra raha manana anadahy (rahavaviny) izy na ny rahavaviny, dia velona be ny ankamaroan'ny dadaben'i Oleksandr toy ny tamin'ny fotoana nanoratana.
Oleksandr Zinchenko Fianaram-pianakaviana
Oleksandr Zinchenko Famintinana ny tantaram-pitiavam-bahaon'ny ankizy momba ny tantaram-pianakaviana - LifeStyle Facts
Tamin'ny volana Jolay 4th, 2016 ny Okrainiana dia nanao sonia fifanarahana miaraka amin'i Manchester City izay manome karama farany an'ny 250,000 Euro (219,000 Pound) isan-taona. Notononinay ny isa, izany no ahazoany ny € 683 (£ 601) isan'andro ary € 28 (£ 25) isan'ora. Manentana anao hahazo ny vola be sy ny hataonao amin'izany. Ho an'i Oleksandr dia aleony miaina fiainana tsotra.
Oleksandr Zinchenko LifeStyle Facts. Ny trosa WTFoot
Oleksandr Zinchenko Famintinana ny tantaram-pitiavam-bahaon'ny ankizy momba ny tantaram-pianakaviana - Zavatra tsy fantatra
Ampahafantaro ny hadisoana: Samy Oleksandr Zinchenko ary Kevin De Bruyne manana ny volo tsara tarehy sy ny endrika mitovy. Io no antony voalohany amin'ny tsy fahazoana hevitra diso sy diso eo amin'ny samy mpilalao roa Man City. Avy any afovoany dia toy ny kambana ireny, fa rehefa miaraka isika dia samy hafa avokoa.
Oleksandr Zinchenko sy Kevin De Bruyne- Ny fitoviana
Raha niresaka momba izany i Zinchenko, indray mandeha; "Henoko izany amin'ny fotoana rehetra, matokia ahy. Betsaka ny olona miantso ahy hoe 'Kev indrindra rehefa miditra amin'ny bus an'ny ekipa aho. Ny mpankafy dia niantsoantso hoe 'Kev, afaka manana sary ve aho?' Fa rehefa nihodina aho, dia ho toy ny 'Oh, tsy Kevin izany'. Ny trosa Telegraph
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaran'ny fahazazak'i Oleksandr Zinchenko miampy ny Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Diary Football Okrainiana
Steven Bergwijn Tantaran'ny Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Andriy Yarmolenko Tantaran'ny Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Luuk de Jong Fihetseham-po momba ny tantaram-pitiavam-bavam-pahalalana bebe kokoa
Yaya Toure tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Ny tantaram-piainan'i Gabriel Jesus Childhood Plus dia navoaka momba ny tantaram-piainany
Daty efa namboarina: 18 septambra 2020
Ny tantaram-piainan'i Bernardo Silva momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra